औँला होउन्जेल त च्याप्‍ने होला नि चुरोट !- विविधा - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन १७, २०७६ राजेन्द्र कोजु
काठमाडौँ — एकजना शल्यचिकित्सक साथीले भन्नुभयो, ‘आजको अप्रेसन कस्तो नमज्जाको छ, साह्रै दुःखलाग्दो ।’मैले भनेँ, ‘किन र ? रोग त नमज्जा नै हुन्छ नि ।’
साथीले भन्नुभयो, ‘हातको औंला काट्नु छ ।’
‘दुर्घटना भएको हो ?’
‘होइन, बर्जर्स डिजिज हो । औंला पुरै सुकेर कालै भइसकेको छ । एम्पुटेट (काट्ने) विना सम्भव छैन ।’
‘अनि हातको औंला किन नि ? खुट्टामा हुने होइन र ?’
‘त्यही त दुःखलाग्दो भनेको । खुट्टा त दुवै काटिइसकेको छ नि ।’
‘हे भगवान !’
‘त्यही त । पहिलो खुट्टाको औंला सुकेर कालो हुँदैखेरि सम्झाएको– चुरोट नखानुस् भनेर,
मानेकै होइन ।’
‘चुरोटले नि हैरानै गर्‍यो । चुरोटले नै क्यान्सर हुने, चुरोटले नै दम हुने, मुटुको रोग, अरु के–के हो के–के ? हामी फिजिसियनकहाँ मात्र चुरोट सम्बन्धी धेरै समस्या आउँछ भनेको त तपाइँहरूकहाँ पनि त्यत्तिकै आउँदो रहेछ ।’
‘क्यान्सरको समस्या त धेरै आउँछ । तर यो बर्जर्स डिजिज पनि आइरहेछ ।’
बर्जर्स डिजिज भनेको खुट्टा, हातका मझौला र साना रक्तनलीहरू साँघुरिएर रक्तसञ्चार कम हुँदै जाने रोग हो । रक्तसञ्चार न्यून हुँदै जाँदा खुट्टा झम्झमाउने, औंलाहरू दुख्ने, चिसो हुने, छोएको थाहा हुन छाड्छ । रक्तनली ज्यादै साँघुरिएपछि रक्तसञ्चार बन्दै हुन्छ र सो रक्तनलीबाट रक्त प्रवाह हुने भाग मर्छ । तसर्थ मरेको भाग शरीरबाट छुट्याउनैपर्ने हुन्छ ।
यो रोगको प्रमुख कारण भनेकै चुरोट सेवन हो । जति पनि यस्तो रोगले सताएकाहरू आउँछन्, चुरोट सेवन गरेकै हुन्छन् । चुरोट सेवन र यो रोगको सम्बन्ध धेरै तथ्यले प्रमाणित गरिसकेको छ । र यो रोग अधिकांश पुरुषलाई हुन्छ ।
‘अनि खुट्टै काट्नुपर्दा पनि कसरी चुरोट छोड्न नसक्या त ?’
‘त्यही त । राम्ररी सम्झाएँ, विस्तारमा बुझाएँ, अर्को खुट्टामा पनि असर पर्ला भनी तर्साएँ, फेरि अप्रेसन गर्नुपर्ला भनी धम्क्याएँ । तर अहँ भएन ।
चुरोट छाडेन ।’
‘छाडेन है ?’
‘एउटा खुट्टा काटेको केही वर्षमा अर्को खुट्टाको समस्या लिएर आइपुग्यो । चुरोट खाँदै नखानु, यो औषधि लिंँदै गर्नु भनेर केही समय हेरियो ।’
‘धेरै गाह्रो भयो डा.सा’ब, भन्दै आइपुग्यो । चुरोटको बारेमा सोध्यो– चुप लागेर बस्छ । परिवारका सदस्यले त्यहीं कराए– ‘कहाँ छोड्नु,
लुकीलुकी खाइरहेछ ।’
‘अनि सम्झाउनु भएन त फेरि ?’
‘भन्न त कति भन्नु । माने पो । दोस्रो खुट्टा नि काट्नैपर्‍यो । मरिसकेको भाग, काटेन भने माथिल्लो भागमा पनि इन्फेक्सन हुने डर ।’
‘हो नि, त्यो त एम्पुटेट त गर्नैपर्‍यो ।’
‘अब त चुरोट छोड्ला, समस्या नपर्ला भनेको, अस्ति फेरि हातको औंलामा समस्या लिएर आइपुग्यो । त्यो पनि त्यस्तै अवस्थामा ।’
‘हैट ! यो बानी भनेको पनि अत्ति नै के ।’
‘अनि तर्साउनु भएन ? यो अर्को अप्रेसन– के रे ? सिम्पाथेटेक्टोमी गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यो अप्रेसन गर्दा यौन उत्तेजना नै नहुन सक्छ । यौन सम्पर्क नै गर्न नमिल्न सक्ने हुनसक्छ भनेर ।’
‘हे,’ त्यो पनि भनिसकेँं । चुरोटको लतमा, केही दिमागमा छिरेको जस्तो देखिंँदैन ।’
‘अब अहिलेको अप्रेसनपछि नि ?’
‘खोइ थाहा छैन । अर्को हातको चोरऔंला र माझीऔंला दुइटा होउन्जेल चुरोट च्याप्ने
होला नि ।’
‘त्यसो नभन्नुस् । जसरी भए नि छोडाउनुस् ।’
‘हुन्छ कोसिस गर्छु । ल, म गएँ । अप्रेसनको तयारी भइसक्यो होला ।’
‘गुड लक ।’
सोच्दै बसेँं, ‘सर्जनलाई मात्र कहाँ सजिलो छ र ?’
आफ्नो बानी त कमसेकम सुधार्नुपर्‍यो नि रोगबाट बच्न ।
यहाँहरूले नि बुझ्नुभयो होला नि ?
चुरोट नखानेलाई बधाई । छोड्नेलाई धेरै बधाई । अरुलाई खान नदिनेलाई झन् धेरै बधाई ।
युवा उमेरकालाई सुरुवात नै गर्न रोक्ने जमातप्रति हृदयदेखि नै आभार ।
चिया पसल, रेस्टुरेन्ट, पसल जहाँकहीं पनि ‘नो स्मोकिङ’ क्षेत्र घोषणा गर्न हार्दिक अनुरोध ।
प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ ०८:५४
फाल्गुन १७, २०७६ णराज तिवारी
संविधानले जनसंख्या व्यवस्थापनको कार्यलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा राखेको छ । नागरिकको गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि अवसरहरूको वृद्धि गर्न संविधानमा भएका व्यवस्था र विभिन्न दीर्घकालीन योजना, कार्ययोजना र नीतिहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको कार्य विस्तृतीकरणले योजना, परिवार नियोजन र जनसंख्या व्यवस्थापनलाई संघ र प्रदेशको साझा जिम्मेवारीमा राखेको छ । व्यक्तिगत घटना (जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद र बसाइँ–सराइ) सम्बन्धित तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने कार्य संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको राष्ट्रिय कार्यसूचीमा रहेको छ ।
कुनै पनि स्थानको जनसांख्यिक आकार–प्रकार, स्वरूप र प्रकृति प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण घटनामध्ये बसाइँ–सराइ एउटा प्रमुख घटना हो । बसाइँ–सराइले गतिशील जनसंख्या र यसबाट सिर्जित हुने जनसांख्यिक मिश्रण तथा तत्पश्चात्को जनसांख्यिक रूप र प्रकारमा निकै प्रभाव पार्छ । यो क्रिया मानव जीवन सुरु भएदेखि नै चलिरहेको छ । यद्यपि सर्वमान्य रूपमा यसको परिभाषा गरिएको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघको बसाइँ–सराइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आईओएम) ले आप्रवासी भन्नाले आफू अक्सर बसोबास गरेको स्थानबाट देशभित्रै वा विदेशको कुनै भूभागमा स्थायी वा अस्थायी रूपले विभिन्न कारणले सर्ने व्यक्तिलाई बुझाउँछ भनी परिभाषित गरेको छ । यही परिभाषाका आधारमा बासस्थान सर्ने प्रक्रियालाई बसाइँ–सराइ भन्न सकिन्छ । नेपालमा पनि बसाइँ–सराइ प्राचीन युगदेखि नै हुँदै आइरहेको छ । निरन्तर प्रक्रिया भए पनि पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँ–सराइको आकार निकै बढिरहेको छ । साथै बढ्दो सहरीकरण, सेवासुविधाको उपलब्धता, अर्थतन्त्रको क्रमिक संरचनात्मक परिवर्तन, सुरक्षा लगायत विविध कारणले आन्तरिक बसाइँ–सराइको आयतन निकै बढ्दै गएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको आन्तरिक बसाइँ–सराइ अन्तर्गत अन्तर–प्रदेश बसाइँ–सराइको अवस्था तथा दिशा के कसरी प्रवाह भइरहेको छ भनी यस लेखमार्फत तथ्यांकीय विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।
नेपालमा सन् १९६१ को जनगणना आन्तरिक बसाइँ–सराइको पहिलो दस्तावेज मानिन्छ । त्यसपछि सम्पन्न सबै राष्ट्रिय जनगणनामा यस्ता विवरण लिएको पाइन्छ । राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन गरिएका नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (सन् १९९५/९६ पहिलोदेखि २०१०/११ तेस्रोसम्म), नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण (१९९८ पहिलोदेखि २०१७/१८ तेस्रोसम्म) मा पनि बसाइँ–सराइको विवरण संकलन र प्रकाशन हुँदै आएको पाइन्छ । बसाइँ–सराइको मात्र छुट्टै सर्वेक्षण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आ.व. २०७४/७५ मा सञ्चालन गरेको भए पनि नतिजा भने प्रकाशन भएको छैन ।
राष्ट्रिय जनगणनासँग नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण र नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणको बसाइँ–सराइको एकाइ पनि मेल खाने देखिँदैन । राष्ट्रिय जनगणनामा जिल्लाको सिमाना पार गरेको अवस्थामा मात्र बसाइँ–सराइ भएको मानिएको छ । तर जीवनस्तर सर्वेक्षण र श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा तत्कालीन स्थानीय तहको सिमाना पार गरेको अवस्थालाई पनि बसाइँ–सराइ मानिएको छ ।
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण तेस्रो नै मुलुकले संघीय शासनको अभ्यास गरेपश्चात् बसाइँ–सराइ सम्बन्धी पछिल्लो तथ्यांक उपलब्ध गराउने आधिकारिक स्रोत हो । यो सर्वेक्षण २०७४ जेठदेखि २०७५ असारसम्म सञ्चालन भएको थियो । यस सर्वेक्षणका अनुसार बासोबास परिवर्तन भई स्थानीय तहभन्दा बाहिर गएकालाई बसाइँ–सराइ गरेको मानिएको छ । सर्वेक्षणमा अपनाइएको परिभाषा अनुसार ‘सामान्यतया बसोबास भन्नाले ६ महिनादेखि बसोबास गरिरहेको स्थानलाई लिइएको छ । तर ६ महिनादेखि बसोबास गरिरहेको नभए पनि अब आउने कम्तीमा ६ महिना बस्ने सम्भावना भएको स्थान समेतलाई बसोबासको स्थान मानिएको छ ।’
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणबाट दुई प्रकारका बसाइँ–सराइका विवरणहरू उपलब्ध हुन्छन् । पहिलो प्रकारको बसाइँ–सराइ जन्मस्थानका आधारमा हुने बसाइँ–सराइ हो भने दोस्रो हाल बसोबास गरिरहेको स्थानभन्दा पहिले बसोबास गरेको स्थानबाट भएको बसाइँ–सराइ हो । जन्मस्थानका आधारमा हुने बसाइँ–सराइ भनेको जन्मेको स्थान र हाल बसोबास गरिरहेको स्थानमा हुने भिन्नताको अवस्था हो । यसलाई ‘लाइफ टाइम माइग्रेसन’ भनिन्छ । त्यसैगरी हाल बसोबास गरिरहेको स्थानभन्दा बाहिर कम्तीमा ६ महिना बसेर आएको अवस्थालाई आवधिक बसाइँ–सराइ/‘पेरियोडिक माइग्रेसन’ भनिन्छ ।
बसाइँ–सराइले मानिसको जीवनका विविध पक्षमा गहिरो प्रभाव पारेको हुन्छ । मानिसका बानी–व्यवहार, आहार–विहार, भाषा, संस्कृति, सोचाइ, पेसाजस्ता वैयत्तिक पक्षमा बसाइँ–सराइले परिवर्तन ल्याउँछ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय पक्षमा पनि बसाइँ–सराइको महत्त्वपूर्ण प्रभाव परेको हुन्छ ।
बसाइँ–सराइको तथ्यांक उपलब्ध गराउने नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण तेस्रोको आधारमा अन्तर–प्रदेश बसाइँ–सराइको अवस्था तालिका १ र तालिका २ मा प्रस्तुत गरिएको छ । जस अनुसार तालिका १ मा प्रदेश अनुसार ‘लाइफ टाइम माइग्रेसन’को अवस्था देखाइएको छ भने तालिका २ मा प्रदेश अनुसार आवधिक बसाइँ–सराइको आँकडा प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालभित्र बसोबास गर्ने जनसंख्यामध्ये ८९.५१ प्रतिशतको जन्म आफू बसिरहेको प्रदेशमा नै रहेको देखिन्छ भने १०.४९ प्रतिशतको जन्म आफू बसेको प्रदेशभन्दा अन्यत्र भएको देखिन्छ । आफू बसिरहेको प्रदेशभित्र जन्मस्थान भएको जनसंख्या कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै अर्थात करिब ९६.९४ प्रतिशत र वाग्मतीमा सबैभन्दा थोरै अर्थात् करिब ७८.२८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । जन्मस्थान विदेश भएको र हाल नेपालमा बसोबास गरिरहेको जनसंख्या जम्मा जनसंख्याको २.९२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यस्तो जनसंख्या प्रदेश २ मा सबैभन्दा धेरै अर्थात सो प्रदेशको जम्मा जनसंख्याको ५.०७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा थोरै अर्थात सो प्रदेशको जम्मा जनसंख्याको ०.५७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय आवधिक बसाइँ–सराइ नगरेको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ९३.४७ प्रतिशत छ । यसरी जनसंख्याको करिब ६.५३ प्रतिशत जनसंख्याले आवधिक बसाइँ–सराइ गरेको देखिन्छ । आवधिक बसाइँ–सराइ नगरेको जनसंख्या कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै अर्थात सो प्रदेशको जनसंख्याको ९८.१३ प्रतिशत र वाग्मतीमा सबैभन्दा थोरै अर्थात करिब ८८.०२ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा आवधिक बसाइँ–सराइ गरी विदेशबाट आएको जनसंख्या नेपालको जनसंख्याको २.२१ प्रतिशत रहेको छ । अर्थात ६ लाख ४१ हजार २० व्यक्तिको यस अगाडिको बसोबास विदेशमा रहेको देखिन्छ ।
बाह्य तथा आन्तरिक बसाइँ–सराइ उच्च रहेको कारण जनसंख्याको वितरणमा असमानता बढ्दै गएकोले यसबाट आर्थिक उत्पादन र वितरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न नदिन जनसंख्या तथा बसाइँ–सराइलाई अन्तरसम्बन्धित विषयको रूपमा व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।
स्थिर संगठनात्मक संरचनाको आभाव हुनु, विस्तृत एवं खण्डीकृत तथ्यांकसहितको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना हुन नसक्नु, जनसांख्यिक लाभांशको रूपमा रहेको उत्पादनशील जनशक्तिको आन्तरिक बसाइँ–सराइ र बाह्य आप्रवासनले कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्नु, विकासको असन्तुलित वितरण तथा जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता कारणले मानिसको स्वस्फुर्त बसाइँ–सराइ प्रभावित भई जनसंख्याको वितरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नु, तीव्र रूपमा बढ्दै गएको सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न नसकिनु, जनसंख्या व्यवस्थापन, बसाइँ–सराइ, आप्रवासन र विकासबीच समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसक्नु जस्ता समस्या यस क्षेत्रमा रहेका छन् ।
बसाइँ–सराइले सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रमा पारेका प्रभावहरूको समयमै विश्लेषण गरी बसाइँ–सराइलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ ।
तिवारी केन्द्रीय तथ्याङ्क विझागका अधिकृत हुन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ ०८:४९
लकडाउनमा यसरी लिनुस् आनन्द
सरुवा रोगको संकटमा विश्‍व
बिनोद रायमाझी, गोपीराम स्याङ्तान